၂၀၀၉ ရတနာဂိုဒေါင် တန်ဆောင်တိုင်.
တန်ဆောင်တိုင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကျနော်တို့အတွေးထဲမှာစတုဒီသာကိုပြေးမြင်နေမိပါတယ်။စတုဒီသာကိုတန်ဆောင်တိုင်မှာ တတ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်း တတ်နိုင်သလို၊များများမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းစုပေါင်းပြီးလုပ်ကြသလို၊ငွေအားမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းလုပ်အားကုသိုလ်လုပ်ပေးကြပါတယ်။
လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့မှာရပ်ကွက်တွေကမီးထွန်းထားတဲ့မီးပုံးတွေကိုလူငယ်တွေကိုယ်စီကိုင်၊စီတန်းပြီးတောင်ပေါ်ကျောင်းဘုရားမှာမီးပူဇော်ကြတဲ့ ဓလေ့ပါ။ မှတ်မိတာကအထက်ရွာရပ်ကပအို့ဝ်လူငယ်အဖွဲ့၊ကော့ကရိတ်ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်ကမ်းချောင်းတောင်ရပ်ကွက်၊ ကရင်လူငယ်၊လုံမငယ်တွေ မီးပုံးကိုယ်စီနဲ့မြို့ကိုဖြတ်ပြီးတောင်ပေါ်ကျောင်းဘုရားမှာမီးပူဇော်လေ့ရှိပါတယ်…..မီးပုံးတန်းကြီးရဲ့နောက်မှာလူတွေဝင်ကစားနေတဲ့ကျွဲနှစ်ကောင်ပါ လာပါတယ်…. ဒီကျွဲနှစ်ကောင်ဟာတောင်ပေါ်ကျောင်းဘုရားရင်ပြင်မှာာကျွဲခတ်ကစားပြပါတယ်…..
ဒေါ်လေး.. လာရင်သားသားကိုလည်းမမေ့နဲ့နော်…။ အေးပါ…အေးပါ….။
စတုဒီသာစားဖို့ခြံရှေ့မှာစာရေးထားတာမြင်ပြီးရပ်ကွက်ကလူတွေပြောနေဆိုနေကြတာပါ။နှစ်တိုင်းတန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာမုန့်ဟင်းခါးကျွေးတာ ထုံးစံဖြစ်နေပြီ။ မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်ကိုကျနော်တို့ဆွေမျိုးတွေ၊သူငယ်ချင်းတွေ၊၀န်ထမ်းတွေအားလုံးဝိုင်းချက်ကြပါတယ်….
ကောင်းဆို….. မြန်မာ၊ရခိုင်၊ကရင်၊ရှမ်း၊ကုလား၊တရုတ်လူမျိုးပေါင်းစုံစေတနာအပြည့်နဲ့ချက်ထားကြတဲ့ ဒီမုန့်ဟင်းခါးမှမကောင်းရင်ဘယ်ဟာကကောင်း မှာလဲဗျာ….ကိုယ့်ငါးချဉ်မို့ချဉ်တာတော့မဟုတ်ရပါဘူး…။ကျနော်တို့အားလုံးချက်ထားတဲ့မုန့်ဟင်းခါးဟာလေ….
အာဂျီနိုမိုတိုအချိုမုန့်ထည့်စရာမလိုလောက်အောင် အရမ်း …အရမ်း….ကို .. ကောင်းနေပါတယ်ဗျာ………။